Gbasara Anyị - Quanzhou Tianli Co., Ltd.
Quanzhou Tianli Nchebe Nmepụta Nchebe Co., Ltd.(SSP) tọrọ ntọala na afọ 2010, dị na Quanzhou City, Fengze nke bara nnukwu ọgaranya na ntutu isi. Companylọ ọrụ anyị bụ ọkachamara na imepụta ngwaahịa iku ume nke ọkachamara.
SSP ruru eru na asambodo ụfọdụ maka imepụta ihe mkpuchi nchebe ọkachamara. Anyị bụ otu n'ime ndị nrụpụta ole na ole ndị nwetara asambodo NIOSH N95. Na asambodo CE, Benchmark, LA, QS, PM2.5 nyere ikike na otutu ndi ozo n'otu oge.
N'afọ ndị gara aga nyocha nke National Institute maka Ahụike na Ahụike (NIOSH), General General of Quality Supervision, Nnyocha na Kpụpụ Ndị Isi Republic of China (AQSIQ), China Consumers Association (CCA), Shanghai Municipal Bureau of Quality and TechnicalSupervision. (SMBQTS), ngwaahịa anyị na-arụ ọrụ nke ọma site na nyocha.
N'etiti nyocha nke ahịa CCA nke Pm2.5 masks na 2015, mkpuchi nke mkpuchi anyị 8285 na-enweta nkwanye ugwu nke naanị ngwaahịa kpakpando okpukpu abụọ na ise. Ndi okacha amara mara ihe nkpuchi a nke MASKin mara amara ma nweta ezigbo aha, na-ewulite onyinye di elu n’uche ndi otu oru na ndi ahia.
ya isi na ngwaahịa dị iche iche nke PPE masks na mgbochi Pm2.5 masks, dị ka kpụrụ cup-ụdị elu filtration masks, foldable elu filtration masks na ọtụtụ ndị ọzọ usoro na iche iche. Anyị nwere ikike siri ike na nyocha na mmepe nke ngwaahịa na teknụzụ ma na-ebulite nhazi nke OEM na ODM. Companylọ ọrụ anyị bụ onye na-emepụta OEM nke ụfọdụ ụdị ama ama ama ofesi na-ahụ maka nchekwa na ngwaahịa ndị pụrụ iche nke ụdị ụlọ amụrụ ọhụrụ na PM2.5.